ကနစိုသီး နှင့် လိုင်ချီးသီး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Environment » ကနစိုသီး နှင့် လိုင်ချီးသီး
ကနစိုသီး နှင့် လိုင်ချီးသီး
Posted by shwe ni on Jan 28, 2011 in Environment, News, Photography, Travel | 18 comments
ကနစိုသီး ပုံကိုကြားဘူးပေမဲ့ မနှစ်ကမှမြင်ဘုးတာ ။
ကနဇိုးသီး ဆိုလို့ ပြောရဦးမယ် !!!!!
ကနစိုးသီးက ချဉ်တာများတယ် အသီးလေးတွေကမှည့်ရင် အ၀ါရောင်သန်းတယ်။
လိုင်ချီးသီးကတော့ မှည့်ရင် နီနီလေးဖြစ်လာပါတယ်။
ချိုတယ် အရည်ရွှမ်းတယ် ကြာကြာအထားမခံဘူး။
အသားနည်းနည်း အစေ့က ကြီးကြီး ဆိုတော့ ၀ယ်စားရတာ မတန်ဘူး။
ကနစိုးသီးဆိုတာ ကတော့ မည့်ရင်စားလို့ ရတဲ့အသီးပါ
အပင်ကြီးမျိုးပါ သစ်ထုတ်လုပ်လို့ မရပါ ထင်းလုပ်လို့ ဘဲရပါတယ် ကနစို လို့ လဲခေါ်ပါတယ်
နွေရာသီ တပေါင်းတခူးမှာ လှိုင်လှိုင် သီးပါတယ်
အဲ့သည်အသီးကို အလွန်အကျွံစားမိလို့ဝမ်းသွားပြီး သေရင်
ဆိုင်းတွေ ဗုံတွေ နဲ့ မသာချလို့ မရဘူးလို့ ဆိုပါတယ် ဒေသခံနတ်တစ်မျိုးနဲ့ မရှင်းမရှင်းဖြစ်လို့လို့ဆိုကြပါတယ်
အများအားဖြင့်ချဉ်ပါတယ် မှည့်မှစားလို့ ရပါတယ် အခွံကအဝါရောင်ပါဘဲ
( နည်းပညာနဲ့ ချိုအောင် အလုံးကြီး အသားများအောင်စိုက်နေကြပါပြီ )
မှည့်ခါနီး မိုးတစ်ပြိုက်လောက်ထိသွားရင် နည်းပညာတွေရှုံးအောင်ချိုမြန်ပါတယ်
အဲ့သည် ကနစိုးသီးတွေကို အပင်တွေစိုက်ခြင်ရင်
ကလေးတွေကို စားစေပြီး အစေ့လိုက်မျိုချခိုင်းပါတယ်
တွင်းကလေးတူးပြီး ကလေးတွေကို အီအီးပါခိုင်းပြီး မြေပြန်ဖုံးပါတယ်
( ပြောလို့ သာပြောတာပါ လူကြီးတွေလဲ လုပ်ပါတယ် )
လိုတဲ့နေရာမှာ ချီးပါပြီးဆိုက်တဲ့ နည်းပညာတွေနဲ့ 
ကနစိုးသီးတွေ ၁၀တန်းတုန်းက သူငယ်ချင်းက အများကြီးယူလာတာ ကျွှေးလို့ စားဘူးတယ်။ အားကြီး ချဉ်တယ်။ ချိုတာတွေလည်း ပါတယ်။ စားရင်းနဲ့ ချဉ်လိုက် ချိုလိုက်ဘဲ။
အခု ယိုးဒယား ကလား တရုတ်ကလားတော့ မသိဘူး ကနစိုးသီး နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင် လိုက်ချီးသီး ၀ါဝါ လေးတွေ တွေ့တယ် အဲဒါ သိပ်ချိုတယ်။
အဲဒါုယိုးဒယားက . ဆူးပြောသလိုပဲ အဲဒါ အရမ်းချိုတယ်။
ကနစိုးသီး အီးအီး ပါမှ အပင်ပေါက်တာတော့ အခုမှ ကြားဘူးတယ်။ အဖေ ပြောတာ ကြားဘူးတာကတော့ ကင်ပွန်းပင်ကို စိုက်ချင်ရင် အစေ့ကို ပြုတ်ပြီး စိုက်မှ ပေါက်တယ်တဲ့။ အဲဒီလိုမျိုး ပြုတ်ပြီး စိုက်ရင် ပေါက်ချင်ပေါက်မှာပေါ့ ဟုတ်ဘူးလား။
အဲဒီလို အပူရှိန် လိုသလောက် ရမှ အပင်ပေါက်တဲ့ အစေ့တွေက နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာ မြေကြီးအောက်မှာ အပူနဲ့ ဖိအားတွေ ကြားထဲမှာ မျိုးဆက် အပင်ကြီး မရှိလည်း ရှင်သန်ပေါက်အောင် သဘာဝက ဖန်တီးပေးထားတာ ဖြစ်မယ်။
လိုင်ချီး အကြောင်း သိကောင်း စရာ
လိုင်ချီးသီးအ၀ါရောင်လေးတွေကို တရုတ်ပြည်မှာစားဖူးတယ် အရမ်းကိုချိုတယ် ပြီးတော့အနံ့ကလဲအီနေအောင်မွှေးတယ် ဒူရင်းသီးလိုတော့ လှိုင်ပြီးမွှေးမနေဘူးပေါ့ လိုင်ချီးသီးမွှေးတာနဲ့တော့နည်းနည်းကွဲတယ် ကနစိုသီးကတော့ မစားရဲသလောက်ပဲ သူကများသောအားဖြင့် ပန်းတာကများလို့လေ
နာတို့ အိမ်မှာတောင် အပင်ရှိတယ် နော်နော် ……
တကယ်နော်. ပြီးမှရှောင်မနေနဲ့နော် ။ fruits ဆိုထမင်းလွတ်စားတာ အထူးသဖြင့် လိုင်ချီး။စပျစ် ။ပန်းသီး။ကီဝီ နှင့်ကြက်မောက်
သူ့အိမ်မှာတင်ရှိတာကျနေတာပဲ……… ပိစိကွေးတို့အိမ်မှာလည်း ရှိပါတယ်နော်…. စတော်ဘယ်ရီ ပင်တွေနဲ့…….. နဂါးမောက်ပင်တွေနော်……
ဖိတ်တော့ ဖိတ်ပြီး လာတော့မှ မသိချင်ယောင် မဆောင်နဲ့နော်.. အခုတော့ အမြည်းသဘောနဲ့ ရွာမှာ အရင်ဝေပါလား။ တနယ်တကြေး သွားဖို့ ဆိုတာ မလွယ် လို့ပါနော်… နော် နော်လို့.. အခု ချားချင်တယ်။
အခုမှ ပါမလာတာ……. အိမ်ကိုပြန်မှာလိုက်ပြီးရင်တရွာလုံးကိုကျွှေးမယ်နော်…
ကျွန်တော်တွေ့ဖူးတဲ့ ကနစိုသီးက အခုလိုတစ်လုံးချင်းမဟုတ်ဘူးဗျ အတွဲလိုက် စပျစ်လိုအတွဲလိုက် သူကအခွံမာတယ်လေ..။ အစလေဲ့ကြီးတယ်။ စပျစ်ထက်ပြောတာနော် အခုလိုဆောင်တွင်းဆိုရင်လာရောင်း ကြတယ် ချဉ်လို့ တစ်လုံးနှစ်လုံးပဲစားပြိး သူများပေးလိုက်တာပဲ နောက်ဝယ်မစားတော့ဘူး သူများစားနေတာပဲ တစ်လုံးလောက်ဆိုပြိး တောင်းစားတော့တယ် ။ လိုင်းချီး သီဆိုတာတော့ ဖျော်ရည်ပဲသောက်ဖူးတယ် ဒါတောင်သူချည့်သောက်ရတာမဟုတ်ဘူး မြစ်ကြီးနားမှာနေတုန်းက ကချင်အရက်နဲ့ရောသောက်တာ ကချင်အရက်က နံလည်းနံတယ် ပြင်းတာလည်းမီးတောက်ဆိုတော့ သူ့ချည့်မသောက်ရဲဘူးလေ ကြာပါပြီ ဆယ်နစ်တောင်ကျော်လှပေါ့ လွမ်းလိုက်တာ ကချင်ပြည်နယ်ကိုပါနော်
အဘနီ ရန်ကုန် ရောက်လို့ လိုက်ချီးသီး ပေါတဲ့ အချိန်ဆို ကျွှေးမယ် ရွာမှာ ချားချင် တယ် ဆိုပြီး တောင်းထားတာ အဲဒါ ရရင် ပြောပါတယ်။ အဟီး